Anyị meriri! | Martech Zone
Ikpeazụ August m dere banyere m ọrụ ọhụrụ at Okporo ụzọ. Nke a abụrụla ihe ịma aka ọnwa 8 na Patronpath mana azụmaahịa na-egosipụtakarị. Akụkụ nke mbụ anyị buru ibu karịa afọ gara aga na ndị ahịa anyị nwere ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-eji ahịa na ecommerce anyị eme ihe.
N'abalị ụnyaahụ, anyị meriri Ọrụ Mira maka Indiana Ozi Teknụzụ Gazelle Company!
Akụkụ kachasị sie ike nke mbọ anyị bụ, na-etinye ọnụ na sistemụ Restaurant POS. Enwere naanị di na nwunye na ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ ọhụụ eme ihe - ọtụtụ n'ime ndị ọzọ ka nọ n'ụwa nke faịlụ ogbe, Access Databases na ọbụna FoxPro. Anyị nwere usoro dị ukwuu maka ịme nke a nke na-adịghị ka azịza ndị ọzọ yana anyị nwere isi maka njikọta POS anyị.
Anyị nwekwara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ n'ime usoro mmejuputa iwu ka anyị bi! Nke ahụ mere ka m na-arụ ọrụ oge igafe na akpaaka na mfe mmejuputa iwu. Daalụ ịdị mma anyị nwere nnukwu ndị otu na Patronpath. Mark Gallo, Onye isi ala, ghọtara ụlọ ọrụ dị n'ime na n'èzí. Chad Hankinson bụ onye ahịa kachasị mma mụ na ya rụkọrọ ọrụ - ọ naghị akwụsị mgbe erere ya - ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ yana ndị ahịa ya na ntinye ha na karịa. Ndị ọrụ anyị kachasị ọhụrụ bụ Tammy Heath, Onye njikwa akaụntụ, yana Marty Bird, onye isi ahịa ahịa.
Tammy bụ ezigbo Njikwa Akaụntụ nke na-eche banyere ndị ahịa ya. Marty abụrụla ihe enyemaka nye m, n'onwe m, ebe ọ haziri ma wuo mmemme ịre ahịa email anyị ma na-arụ ọrụ iji dozie arụmọrụ anyị site na itinye n'ọrụ. Salesforce yana ngwaọrụ anyị dị ugbu a, Ngwa Google na Kpọmkwem Ngwaọrụ.
Ndị otu ahụ akwụsịghị ebe ahụ. Kristian Andersen na ndị mmekọ nyere anyị otu ọnụnọ weebụ dị egwu na ika. Anyị na-aga n'ihu na-aga n'ihu alo site na anyị osisi - na-agba ọsọ ulo oru dị ka Nchekwa onwe, AhụikeX, Internetlọ akụ Internetntanetị izizi na Ngwa RICS.
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ: Patronpath enweta mmeri Techpoint MIRA Award
Tags: ọchụchọ ịzụ ahịa na mpagharaMediaNdagwurugwu Mediamilomilo ikwoSilicon ValleyAnya Silicon Valleynjikọ slidesharembido izu ụka
Eleghị anya ị ga-emepe Mail a…
Mee 17, 2008 na 3: 58 PM
Douglas, daalụ! Arụla m ọrụ na ihe POS ma amaara m otú ọ siri sie ike ka m nwee ike ịghọta ihe nrite a na ihe ọ pụtara maka ụlọ ọrụ…
Mee 17, 2008 na 8: 35 PM
Woo-hoo! Ihe nrite dị egwu na nke kwesịrị ekwesị, Doug. Izute gị na NRA bụ isi ihe dị elu nke ụbọchị maka otu Kwingo.
Ụfọdụ n'ime anyị na-emepụta ihe nzuzu; ụfọdụ n'ime anyị na-emepụta Ihe bara uru. Ị na-emepụta ihe bara uru - dị mma na ya
Mee 18, 2008 na 10: 10 AM
Ekele! Ọ dị ka mbọ gị rụpụtara nke ọma.
Mee 18, 2008 na 1: 49 PM
Mee 18, 2008 na 11: 03 AM
Ekele Doug! Lee mmezu dị ịtụnanya ọ bụ!